Ihe ị ga-eme mgbe ị wụnye Linux Mint 14 Nadia | Site na Linux
Ihe ị ga-eme mgbe ị wụnye Linux Mint 14 Nadia
Oge ọ bụla ha dị ọzọ na ndị ọrụ nke nkesa a ị maara gbasaa de Ubuntu ma were obere ụzọ dị iche. Na ụdị ọhụụ Ọ na-abịa na ụfọdụ atụmatụ ọhụrụ yana na nsụgharị abụọ: Cinnamon na MATE.
Mgbe emechara ihe ndị a, anyị na-anọgide na-edepụta ụfọdụ ihe nwere ike ime ka ndụ dịkwuo mfe mgbe wụnye ọhụrụ version Nadia.
Na Mmasị NchNhr> Ndị ọkwọ ụgbọala ọzọ anyị nwere ike imelite ma gbanwee (ọ bụrụ na-ịchọrọ) onye na-anya ụgbọ ala eserese anyị nwere.
O kwere omume na ụfọdụ nrụnye akụrụngwa a na-efu efu dị ka ọ bara uru mgbe ọ na-ejikwa ngalaba nke diski anyị. Inwe ya na nkesa anyị dị mfe dị ka iji kọmputa ede sudo apt-nweta wp gparted ma ọ bụ site na Onye njikwa Mmemme.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Faịlụ FileLet jiri » Ihe ị ga-eme mgbe ị wụnye Linux Mint 14 Nadia
Cheregodi, ị nwere ike nyere m aka, m nwere mint lint 14 xfce linux mana nsogbu bụ na ọ naghị enye m ọdịyo ọ bụla ma tupu m nwee Linux Linux 13 xfce ma jiri ụda ihe m gbanwere nhazi ahụ na-enweghị ampilifaya ma ọ bụrụ na ọ nye m ọdịyo naanị na nke ahụ n'ihi na ọ bụghị nke ọzọ, mana nhazi nhọrọ a anaghị abịa ọzọ ọ naghị enye m ọdịyo ọ bụla, biko nyere aka
Zaghachi Jose Salvador Toral
Monocot Zea Mays dijo
Ihe Linux a na-efu m otu ọkara, mana ọbụlagodi na achọrọ m ịga n'ihu na-enye Linux ... Enwebeghị m ike ịwụnye mkpọ asụsụ .. (M tinyeworị n na-efu, na-esikwa na njikwa mmasị) mmadụ nwere ike inye nye m ndụmọdụ? Daalụ
Zaghachi Monocot Zea Mays
Ihe ederede bu ederede ederede, na wayo. Edere isiokwu ahụ na mint 12, nke a bụ njikọ nke ndu mbụ. Detuo ihe na-enye m nsogbu n’obi. Ọ ga-abụ n'ihi na abụkwa m onye edemede ...
Zaghachi Kurumu Kurono
Milton Hernan More dijo
Ndewo, olee otu m ga-esi hazie ihu igwe nkpuchi nwere LinuxMint arụnyere? Agbalịrị m ịgbaso otu ihe achọtara m ebe a mana ọ enyereghị m aka.
Zaghachi Milton Hernán More
n'ihi na, wụnye burg na awade a dịgasị iche iche nke nhọrọ 🙂
site na ọnụ
sudo tinye-apt-repository ppa: n-muench / burg
sudo apt-wụnye burg burg-common burg-themes burg-themes-nkịtị burg-emu burg-pc
hey enwere m nsogbu
A naghị edozi ahụigodo ahụ, mkpụrụedemede ụfọdụ anaghị arụ ọrụ dịka «q» «a» «z» «# 1» «Esc» «Tab» «Cap Locks» etc ...
Gbalịa asụsụ Spanish ọzọ na nke m otu ihe ahụ mere m mana m nwara ọzọ ọ bịara na-eje ije
Anọ m na ubuntu linux Linux na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ XD
Zaghachi ka tke
Paolo udo dijo
Ekele m na-enyere muxo…. ebe ọ bụ na enwere m mkpali ka ihichapụ windwos 8 ma jiri Linux mint14 =)
Zaghachi Paolo Paz
Ọ bụ Gilberto Pizarro. dijo
Daalụ, ọ nyeere m aka nke ukwuu ebe ọ bụ na m dị ọhụrụ na ngwanrọ na - akwụghị ụgwọ; ọ bụ ezie na ọ na-echetara m ụbọchị MS-DOS m. (ha ga-agbakọ afọ m hehe heh) mpaghara ngwanrọ emeela ka m nwee mmetụta nke akụkụ (na anyị bụ) nke nnukwu ezinụlọ.
Zaghachi Gilberto Pizarro.
Ndewo, enwere m nsogbu, enweghị m ike imeghe ibe http://www.youtube.com Ọ na-awụ m nso dịka mgbe enweghị insternet na nchọgharị Firefox. Enwere m Linux mint 14, emelitere ma wụnye plugins ahụ. daalụ
O nwere ike ịbụ na nke ahụ mere, n'ihi na n'oge ịhọrọ nhọrọ ahụ, ị ​​hapụghị ohere efu (nkebi), ka ọ chọọ ya, ma wụnye ya na akpaghị aka; ihe
ọ ka mma ịhọrọ nhọrọ nkebi akwụkwọ ntuziaka ...
Ọ dabere ma ị na - agba ọsọ ya (dịka obere obere), ma ọ bụ ma wụnye ya; nsogbu ahụ m
ọkọnọ, ruo mgbe m wụnye ya (na a ntuziaka nkebi), na ozugbo efehe na
mmelite, na usoro ahụ ebudatara m ngwugwu asụsụ (Spanish),
ahọtala mbụ; nke mbụ, lelee mmelite gị, n'ọtụtụ ọnọdụ
ma ọ bụrụ na emezi ntọala izizi na / ma ọ bụ rụọ ọrụ …… ..
Ọ ga-amasị m ịmata ma m nwere ike ibudata xfce ma ọ bụ ọnọdụ gnome ebe ụdị a na-abịa na kde, ka m ga-ebudata ụdị nke na-abịa xfce? Ana m ekwu ihe kpatara na anaghị m amasị KDE
Zaghachi JeremiY Pompa
Doziri n. Nso ndudue ke akanam?
Achọrọ m enyemaka enweghị m ike ịwụnye mkpọ asụsụ
Naanị m wụnye ya mana ọ naghị akpọ ụdị ọ bụla, ọ bụghị site na sistemụ ma ọ bụ na ịntanetị. a mmadu nwere ike inyere m aka?
Gbalịa dezie faịlụ ~ / .config / ubuntuone / syncdaemon.conf
Chọọ maka ahịrị: files_sync_enabled = segha
Dochie ya na: files_sync_enabled = Eziokwu
Chekwaa mgbanwe ndị ahụ ma mepee UbuntuOne akara panel. Ọ bụrụ na nke ahụ anaghị arụ ọrụ ọfụma, bidogharịa.
nicorobin 120 dijo
ndo na ọnụ ya na mgbọrọgwụ ma ọ bụ mgbọrọgwụ m amaghị nke ọma.
Ndewo ndị mmadụ, ọ ga-amasị m ka mmadụ nye m nsogbu na nsogbu m ..
Ọ na-apụta na mgbe ị na-etinye ya, ahọrọ m nhọrọ iji wụnye ya na Windows 7, echere na m ga-enwe ike ịhọrọ nke m ga-eji mgbe m gbanye netbook m (EXO mate X352), ugbu a, na mmalite, grub naanị na-ahapụ m ka m mee 2 memtest na ụzọ 2 iji bido mint (nke na-adịkarị na mgbake). Kedụ ka m ga - esi jiri aka tinye windo ka imetu ya? Achọpụtara m na ọ nweghị faịlụ ehichapụ ụdị sistemụ a mgbe etinyechara Mint.
Zaghachi Rodrigo Gomez
sudo melite-grub2 na ọnụ na ebe ahụ ọ regenerates a idide ebe windo ga-abụ na ọ bụ ya. mint Linux 14
Ndewo, amaghị m etu esi esi menu ihe site na ọkwa ọkwa yana ihe osise ka njọ, enweghị m ike itinye akara ngosi ọzọ na MENU ederede. Ọzọkwa mgbe m wedatịrị windo, ọ naghị anọ n'ọkwa ọkwa mana m tufuru ya. ọ bụrụ na onye ọ bụla maara ka esi arụkwa ihe a na-ekele gị nke ukwuu
Zaghachi na Montevideano1
Na nyocha ọchụchọ nke gosipụtara na menu ị tinyere Orí ... Amaara m na ọ bụghị nke ukwuu mana ị ga-etinye ya na ihe niile wee lelee, nke ahụ ga-enye gị nhọrọ nke Software Origins ebe ahụ nhọrọ nke na-ekwu mgbakwunye ọkwọ ụgbọala ma ọ bụ Ọzọ ọkwọ ụgbọala.
Enwere onye na etinye ya na ndabara na ndị ụlọ ọrụ mepụtara dịka nVidia na AMD, ị na-etinye nke mbụ na-ekwu anwale ma ọ bụ nwalere ma ị kwuo Mee mgbanwe (Creo xD) ma ọ bụ Mee Mgbanwe ị na-eche ka ọ budata, m naanị ịmalitegharịa na have ga-ahụ ma ọ bụrụ na aha kaadị gị egosiworị na Ntọala, ọ bụrụ na ọ bụghị ... Enwere nsogbu ahụ, amaghị m, jụọ onye nwere nnukwu ahụmịhe (Noob)
Zaghachi Jairo Mejia
Uchenna 79 dijo
Kedụ ka m ga - esi wepu ọnụ ya ka ọ bụrụ naanị 2?
Compa jeere m ozi zuru oke ma emechaala m Linux Mint 14 ma ọ dị ezigbo mma na ezigbo ọmarịcha ọ masịrị m karịa Ubuntu 12.04, Achọrọ m ịhụ etu VLC si arụ ọrụ na OS a. Mana ọ bụrụ na ị mee nke a, m ga-amata ya, ana m agwa gị 🙂
Ekele dịrị ndị niile na-ewetara anyị nso na Linux
Enwere typo na iwu ịwụnye mkpọ asụsụ. Enwere enweghị n na ya
laguage-ngwugwu-gnome-es, ọ ga-abụ ngwugwu-gnome-es
Zaghachi Ainus Solheim
Nnukwu onyinye gị !! o jeere m ozi nke ukwuu! (NA)
Ana m enwe nsogbu na nbudata mmelite.
Ozi dị ka ndị a
E: indexfọdụ faịlụ ndenye dara ibudata. Elegharawo ha anya, ma ọ bụ jiri nke ochie eme ihe
Mana ọ naghị arụnye mmelite ọ bụla.
Danniel nwoke dijo
ọ bụrụ na ọ dị iji wụnye ndị ọkwọ ụgbọala ọzọ ha na-aga na isi mmalite ngwanrọ na na taabụ ikpeazụ ha na-apụta
Zaghachi Danniel Navas
Na Mint 14, na Mmasị ọ nweghị ngalaba na-ekwu "Ndị ọkwọ ụgbọala ọzọ". Na mgbakwunye na nke ahụ, dịka na Ubuntu 12.10, ị ga-akpachara anya na AMD Radeon HD nke usoro 2xxx-4xxx, maka okwu Xorg: http://infografia-libre.blogspot.com.es/2012/12/como-instalar-el-driver-privativo-amd.html
Ihe niile dị mma na mmemme akwadoro. Nanị nsogbu m nwere bụ na maka ihe ụfọdụ UbuntuOne agaghị emeghe. Agbalịrị m otu puku ụzọ ma ọ gaghị emeghe. Ọ bụrụ na m na-agba ya na ọnụ, ọ ga-emepe mana ọ na-egosi m "njehie IPC" (ihe osise etinyere).
Echiche ọ bụla otu esi edozi ya? Agbalịrị m ịwụnye site na nchekwa na site na ppa mana ọ nweghị ihe ọ bụla. Achọrọ m ịkwatu hahaha… 🙁 aro ọ bụla?
Anọ m na Mate na-esoghị Cinnamon, mana lelee menu na "Nchịkwa" akara ngosi dị ka kaadị ọdịyo ma ọ bụ ụda!
Zaghachi Marcelo Andres González Díaz
Have nwere nsogbu ahụ na ebe nchekwa gị, ụfọdụ njehie na ha, mana ọ bụghị na sava ebe faịlụ ndị ahụ dị, emere m ya ma ọ rụụrụ m ọrụ! Cheta na ọ bụrụ na ịmalite ịwụnye mmemme mana n'ihi ihe ụfọdụ ị rụchaghị ime ya, ị nwere njehie na ebe nchekwa!
Enwere m njehie mgbe m chọrọ ịwụnye mkpụrụ edemede site na ọnụ, mgbe ọ jụrụ m ma m chọrọ ime ya ma ọ bụ na ọ chọghị, ọ na-ekwu Aborted!
Ntụnye ọ bụla iji dozie ya, ana m ekele gị nke ukwuu na m ga-enwe ekele maka ya nke ukwuu
Nke ahụ na-eme mgbe ị họọrọ ịghara! Lelee na ọ họrọ nke ọma ebe ọ na-ekwu ee!
gbaa mbọ hụ na i coomiri iwu ahụ niile nke ọma! Ọ mere m ma ọ rụpụtara m!
Achọghị m ịchọta "Ndị ọkwọ ụgbọala ọzọ" na Cinnamon, onwere onye ma ebe ha nọ?
Ifuru ọhịa dijo
Ọbụna ịgbakwunye "n" nke na-efu na iwu iji na-agba mkpọ asụsụ ahụ, enweghị m ike ịme ya .. Enwetara m na agaghị ekwe omume http://security.ubuntu.com/ubuntu/pool/main/t/thunderbird/thunderbird-locale-es-es_17.0+build2-0ubuntu0.12.10.1_all.deb 404 Achọtaghị [IP: 91.189.92.200 80]
E: Enweghị ike ị nweta ụfọdụ faịlị, enwere ike m ga-agba ọsọ "apt-get update" ma ọ bụ nwaa ọzọ na –fix-efu?
ndewo, abụrụ m ihe ọhụrụ na nke a, m na-eji Linux mint 15, enwere m nsogbu na-esote, ana m agbalị imelite site na njedebe ma ọ bụ na-eme ihe nbudata mana ọ na-atụ m njehie a:
Agụ ndepụta ngwungwu ... Njehie!
W: GPG njehie: http://archive.canonical.com raring Hapụ: mslọ ọrụ ndị a enweghị isi: BADSIG 40976EAF437D05B5 Ubuntu Archive Automatic Signing Key
W: GPG njehie: http://archive.ubuntu.com raring Hapụ: mslọ ọrụ ndị a enweghị isi: BADSIG 40976EAF437D05B5 Ubuntu Archive Automatic Signing Key
E: Enwetara ngalaba na-enweghị ngwugwu: nkụnye eji isi mee
E: Nsogbu na MergeList /var/lib/apt/lists/archive.ubuntu.com_ubuntu_dists_raring_restricted_i18n_Translation-en
E: Nchịkọta ngwugwu ma ọ bụ faịlụ ọnọdụ enweghị ike ịtụgharị ma ọ bụ meghee.
M ga-enwe ekele maka enyemaka gị
Zaghachi ka rhony
Daalụ… .. ezigbo onyinye.
Zaghachi ma mapg22
Enweghị m ike ibudata ihe ọ bụla
nwa mmiri dijo
Ihe niile dị mma, mana isi nsogbu m bụ na awụnyere m na draịvụ m
Linux mint 14 na enweghị m ike ijikọ na ịntanetị you nwere ike inyere m aka, m ga-ekele gị, ma ọ bụghị na m ga-amalite, na-achọ ihe dị iche. daalụ.
Zaghachi n'ụsọ osimiri
Ebe ọ bụ na enwere m ike ịwụnye Linux Mint 14 nadia, enweghị m ike ịntanetị, achọgharịrị m
ebe dị iche iche nke nghazi ma enweghị m ọchụnta. A mụrụ nsogbu m (echere m)
mgbe m malitere ibudata ngwugwu ahụ, n'ihi na otu n'ime windo ndị pụtara, otu n'ime ha
Akara m na ọ dị na ịntanetị, mana na ọ dịghị mkpa, ịga n'ihu, emere m ya na n'ikpeazụ
Enweghi m ike ịbanye na ịntanetị, enweghịkwa m enyemaka site na onye ọ bụla na mgbe ihe pụtara na ọ bụ iji mee ka m nwee mgbagwoju anya karịa m. Biko M na-ede ihe a site na kọmpụta ọzọ m na-arịọ maka enyemaka iji malite ịrụ ọrụ na usoro m ọhụụ
OPERATIONAL LINUX MINT 14 NADIA. Daalụ
Zaghachi charles menchero
Nwoke nke a bụ isiokwu sitere na 2 afọ gara aga xD, dị ka ihe ọ bụla ị na-enwe mgbe niile na ebe ị nwere http://foro.desdelinux.net/
Linux Mint 14 anaghịzi arụ ọrụ, nkwado kwụsịrị na May. Ga-enweta 17.
Hapu ihe edetu banyere nsogbu m nwere. Ihe niile dị mma belụsọ na enweghị m ịntanetị, amaghị m ihe na-eme
Ma nsogbu a sitere n'aka gị ma ọ bụ ahụmịhe m, ihe ọ bụla m chọrọ na obi m niile ka ị nyere m aka n'ihi na n'agbanyeghị nsogbu a na-amasị m Linux Mint 14 Nadia echere m na anyị ga-emekọrịta ihe mgbe m nọ na ịntanetị, ruo ugbu a nwee ụda, foto, vidiyo ma m nwere ike ide ya, Achọrọ m naanị TERntanetị. Daalụ Charles 08/14/14
menchero shawls dijo
Ha zipụrụ m ka m ibudata ma ọ bụ ibudata Linux Mint 17. Ọ dị mma nke ukwuu, kedu ka m ga - esi budata ya ọ bụrụ na m nwere 14 na diski m ma ọ bụrụ na m budata ya, m ga - enwe nkwado ma nwee internet, mana achọrọ m enyemaka, ọ bụghị nkwupụta.
Ghọta na ejiri m oge dị ukwuu na-agba mbọ iji nweta sistemụ arụmọrụ m chọrọ
echekwa m na m nwere obere nkwado site na gị enwere m ihe m chọrọ. daalụ, na-eche nzaghachi Charles 08/14/14
Zaghachi chaeles menchero
Amaghị m ma ọ bụrụ na azịza sitere na mr «isi mmalite« ziri ezi, mana echeghị m na ọ bụ mmasị m zuru oke
eziokwu ahụ ọ gwara m na mint lint abaghị uru ọ gbalịghịkwa inyere m aka, n'ihi na site na nke a na ụda ihe ijuanya dị jụụ, ọ kwụsịghị ịkọwa ihe ọ bụla, naanị ịga na Linux 17. Echere m na nke a
mmadụ ga-enwe nsogbu ma amaghị etu esi enye "onye ahịa ahịa" onye rịọrọ maka enyemaka.
Ihe m na-eme SR LEFEVRE M Laghachila ebe m nọrọ ma ọ bụ m ga-ahọrọ ka ị nyere gị aka. Daalụ
Achọrọ m ịbanye na ntanetị bụ ihe niile m na-arịọ.
Onwere onye mara ka m gha esi wunye onye na-akwọ ya maka Mint nke onye nbipute Dell 1133?
Vidio ahụ dị ka oge na-adịghị anya, laptọọpụ m adịla nká, gịnị ka m nwere ike ịme ?? daalụ ekele
Zaghachi JUANMA MERIDA
Aghọtaghị m. Gịnị na-eme n’ezie mgbe ị chọrọ igwu vidio?
Nwara iji VLC ma ọ bụ Mplayer?
Ọ bụ nke ole na ole ego ??? Nye anyị arụmọrụ nke ndị otu gị ... 🙂
Na-aga n'ihu na nzaghachi ọ bụla site na mkpụrụ obi ebere nke nwere ike inye aka
Achọrọ m ịwụnye m Dell 1133 laser multifunction printer na Linux Mint ...
enyemaka, nyere aka ... biko
Mepụta ọhụrụ Konqi na Krita
Conkọwapụta echiche: "Ọnọdụ Desktọpụ" na "Ndị njikwa windo".